Njengamanje ingozi enkulu hhayi kuphela empilweni yomuntu, kodwa ngisho nokuphila kwakhe, izifo ezifihliwe, izifo ezidluliselwa ngocansi. Kwezokwelapha, a "ukutheleleka esicashile" libhekisela izifo ezifana chlamydia, ureaplasma, mycoplasma, trichomoniasis, Papillomavirus womuntu, cytomegalovirus, herpes zangasese.
Kusukela kuyinkinga enkulu kangaka, ngeshwa, akuyona insured iyiphi indoda noma owesifazane. Ngisho khona abalingani elilodwa noma amabili ngokobulili futhi engaphenduki ngeke ukuvikela kusuka okuvela izifo. Isici lezi zifo ukungabi izimpawu kahle ichazwe. Yingakho bebizwa okufihliwe, ngoba beseka isikhathi eside kungase kungabi uyazi sempilo yabo.
Kaningi izifo esicashile e besifazane abaye osekunesikhathi kukhona umzimba futhi kungukuthi bazenza wazizwa, ukucasulwa ukukhulelwa, ngesikhathi lapho amasosha omzimba esebuthakathaka ikakhulukazi futhi ukuguqula hormone. Ngakho-ke, izazi eziningi bagcizelele ukuze abazoba abazali ziye zahlolwa for ukutheleleka esicashile ngaphambi nje ebamba isisu. Phela, ukuqeda kubo ngesikhathi sokukhulelwa is nzima nakakhulu futhi inqubo, kungaba nemiphumela emibi embungwini.
Ezinye izifo esicashile besifazane bayingozi kakhulu impilo, kuyilapho abanye - kancane. Noma kunjalo, yisiphi isifo esithathelwanayo ocansini kubi uhlelo genitourinary futhi ukhonza njengesisebenzi isici esihle ukuthuthukiswa izifo ezimbi nakakhulu, okuyizinto ngezinye izikhathi kunzima ngempela aphathe.
ukutheleleka esicashile besifazane kudala ingozi ephezulu ukhulela ethunjini. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona izifo ezidluliselwa ngocansi kukhona ingozi ukwehluleka noma ukukhulelwa lantambama umbungu. Ngisho nge yezinkinga lokuzalwa ophumelelayo uvame kuphakama emva kwabo. Akubona bonke izifo zocansi kungabangela umonakalo ezingenzeka embungwini. Kodwa izifo ezifana mycoplasma futhi ureoplazma phambili ezingenzeka embungwini ongakazalwa.
A Kuyaziwa ezifana kubhekwa njengento omunye umzimba eziningana yenethiwekhi kuba ngokushesha izifo ezithathelwanayo. Kulesi simo kukhona umthwalo omkhulu kuso, ngeke bakwazi ukubhekana nabo ngaphandle Ukungenela ngesikhathi esifanele kuka odokotela wayenobuhlobo eside, ngokuvamile okuholela eziyingozi kuphakama.
Ngokuvamile, ukulawula izifo eziningi Kwenziwa ngokwethula ku umzimba futhi immunnostimulyatorov antibiotic. Ithanda emva kokwelashwa ukuze afeze ukuhlolwa control, eqinisekisa alulame ngokugcwele. Kungenjalo, kubalulekile ukuba basebenzise ezinye, ukwelashwa ngendlela eyingozi kakhulu.
ukutheleleka esicashile kubantu besifazane, futhi izimpawu Cishe ziphinde zenzeke, usengakwazi angabonwa ngumuntu ukulunywa okuncane noma ukuqubuka esikhumbeni endaweni zangasese. izimpawu Kugcine ezinjalo ezicashile imizuzu embalwa, ngakho iziguli akuvamile uqaphela kubo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izifo esicashile azibonakali, ezithinta cishe ngeke uhlelo urogenital zomzimba womuntu, futhi umsebenzi nezinye ngokuphelele izitho ezibalulekile. Ukwelashwa nokuvikelwa noma yiziphi izifo ezithathelwanayo kufanele kube tekubukana futhi ehlelekile lapho isiguli ubophekile ukuba ngokuqinile bathobele bonke imiyalelo udokotela ukuba khona, kungenjalo yokutakula ngeke afike ngokushesha. Okokuqala, uchwepheshe uyoqoka antibiotic amavithamini ezithuthukisa amasosha omzimba nesineke womuntu.
Akufanele neze ukugibela Ukugula kufanele kubhekwe njengesitha sina noma ukuzilimaza medicate, okungase ukulimaza impilo isiguli. Yokutakula kungenzeka kuphela umtholampilo ezikhethekile ngaphansi kokuqondisa ochwepheshe obhekana nazo.
Isisu ubuhlungu esesikhathini. Yini okumelwe uyenze? Lapho ukubona udokotela?
Kubuhlungu ukwenza uthando, kungani
Life kanye Works of feta. Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila feta
Impi Patriotic ka 1812. Kafushane ngezimbangela, Yiqiniso nemiphumela
Ngingaba ukuphuza utshwala kanti ukuphuza imithi elwa namagciwane: kwedivayisi nemiphumela
Walnut sauce. ukupheka Izici